Xoghayihii degmada Kaxda iyo labo ka tirsan Ilaaladiisa oo lagu dilay Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Dabley hubeysan ayaa maanta barqa-nimadii degmada Dharkeenley ku dilay Xoghayihii maamulka degmada Kaxda Bile Axmed Abuukar.
Sida ay idaacadda Star FM u sheegayaan goobjoogayaal, Xoghayaha ayaa xilliga la weeraray kasoo baxay gurigiisa isaga iyo ilaalaldiisa waxeyna wateen gaari nooca raaxada ah. dableyda dilka geysatay oo wadatay gaari nooca raaxada ah ayaa rasaas ku furtay gaarigii uu saarnaa xoghayaha degmada Kaxda, waxaana ay halkaas ku dileen xoghayihii degmada Kaxda iyo labo ka tirsan Ilaaladiisa.
dableyda dilka geysatay oo wadatay gaari nooca Noah ayaa goobta ka baxsaday, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in dableydu ay goobtii ka baxsadeen.
Maamulka Degmada dharkeenley oo ah meesha uu ka dhacay weerarka lagu dilay xoghayahii degmada Kaxda ayaa warbaahinta u sheegay in ay gacanta ku dhigeen gaarigii weerarka lagu fuliyay oo ay taayarradu ka banjarsanaayeen.
Maalmihii u dambeeyay ayaa waxaa ka dhacayay degmooyinka Gobolka Banaadir dilal kala duwan, waxaana tan iyo markii ay dhalatay bisha Ramadaan magaalada Muqdisho ka dhacay weeraro iyo qaraxyo ay mas’uuliyadooda sheegatay Al-Shabaab.